Obi ụtọ Bloggoween! | Martech Zone
Tuesday, October 30, 2007 Sọnde, Septemba 30, 2012 Douglas Karr
Ọ bụrụ na ị nweta ohere, kwusi site na blog taa. Ekpebiri m iji ejiji n'afọ a maka Halloween.
O juru m anya na ndị mmadụ anaghị achọ blọọgụ ha mma n'ụbọchị ememe na ụbọchị ezumike. Nwa m nwoke yi uwe dị ka agadi nwoke (ọ chọtara IHOP Cardigan na Goodwill), nwa m nwanyị nọkwa na Emo Psycho Killer ogbo nke ntorobịa.
Ma mụ onwe m, m ga-anọ na khakis m tụkwasịrị obi echi, ikekwe m ga-eji uwe mwụda mara m ga-apụ!
Ihicha ụlọ na Yahoo!
Ọkt 30, 2007 na 11:17 PM
Ọ dabara gị nnọọ, Doug. Obi ụtọ na Halloween!
Ọkt 30, 2007 na 10:44 PM
Agaghị m eme ka oh kwuo okwu banyere mmelite .. eziokwu agaghị m 🙂
Ọkt 31, 2007 na 6:01 AM
Hmmm, Frankenstein na-azụ ahịa. Na-eche ihe Mary Shelly gaara eche banyere nke ahụ… Enwere m ike ịkọ mgbanwe maka Ekele na ekeresimesi.
Nwee ezigbo ezumike. Mee ka ndị eze ahụ nwee ego.
Ọkt 31, 2007 na 6:40 AM
Look mara mma. Obi ụtọ na Halloween!
Jason (iko agwa)
Ọkt 31, 2007 na 7:32 AM
Ma ọ dịkarịa ala, ọ ga-adị mfe ịhọrọ ụbụrụ gị ugbu a.
Ọkt 31, 2007 na 10:01 AM
Kasị mma ikwu ruo ugbu a!
Ọkt 31, 2007 na 8:49 AM
Yabụ kedu ebe ejiji ahụ? haha.
Ọkt 31, 2007 na 9:25 AM
Ọkt 31, 2007 na 2:51 PM
Abụla onye kpọrọ asị
Ọkt 31, 2007 na 9:26 AM
Kwesịrị n'ezie ka mmadụ lee anya na bee ya nwere ike ibute ọrịa. Gangrene ma eleghị anya? Obi ụtọ na Halloween!
Ọkt 31, 2007 na 10:09 AM
Meela nnukwu okwu maka ịhapụ onye na-agụ RSS mgbe ụfọdụ ma gaa na blọọgụ kachasị amasị gị. Agaraghị m echefu ihe a! Daalụ maka ọchị kachasị mma m nwere taa! 🙂
Ọkt 31, 2007 na 10:49 AM
Emebighị m blog anyị maka Halloween, agbanyeghị, etinye m foto nke otu ndị na-ere ahịa email anyị jiri ejiji 'ndị otu'
Ọkt 31, 2007 na 1:01 PM
Nke ahụ dị oke mma! Ọ dị ka ụlọ ahịa na-atọ ụtọ ịrụ ọrụ! Daalụ maka ime ka m mara na abụghị m naanị goof gburugburu ụgbụ.
Ọkt 31, 2007 na 1:29 PM
Kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị, anyị rọrọ echiche ahụ dum n'ehihie ụnyaahụ. O juru m anya na anyị wekọtara ya ọnụ.
Ọkt 31, 2007 na 1:37 PM
I chefuru olu ya, ma ọzọkwa ị nwere ịghasa aghara aghara.
Ọkt 31, 2007 na 2:19 PM
Ị nwere Ee e echiche otú nke ahụ si bụrụ eziokwu, Sterling!
Ọkt 31, 2007 na 6:11 PM
Chei, isiokwu ezumike yiri ka ọ na-arụ ọrụ. Adịwo m onye na-agụ akwụkwọ ebe a ntakịrị, mana bloggoween post kpaliri m ịza ajụjụ, n'ikpeazụ ma tinye mmụọ amoosu m afọ ọhụrụ na blọgụ m. Amụma: Ọ bụghị Nchekwa maka ỌR:: (anyị na-ere ahịa ntụrụndụ okenye, mana blog ka bụ ahịa na-elekwasị anya, ọ bụghị egwu egwu) Obi ụtọ Bloggoween, Spooky Custom Adult Stores cga nke Ọma.